Isihloko Esivulayo Iphrojekthi bekunguhambo lokuhlola izindaba zokuphunyuka (ingqikithi yonyaka ka-2019) ngokungakhathali nangokucacile, okubonisa izinguquko, izinto ezintsha kanye nemiphumela yalokho. Zonke izibuko zihlanzekile futhi zikhululekile ukubukwa, ziqhathaniswa neqiniso elingathandeki esenzweni sokuphunyuka. Idizayini ihlala iguquka futhi amajamo morphing ku-animation amelela isenzo sokufundwa kabusha, okubangelwa uhlobo oluthile lwesimo. Ukuphunyuka kunezincazelo ezahlukahlukene, ukutolika kanye nephuzu lokubuka kuyehluka kusuka kokudlalayo kuya kokungathi sína.
Indandatho Yokwakheka Idizayini ifaka isakhiwo sohlaka lwensimbi lapho i-druzy ibanjelwe khona ngendlela yokuthi kugcizeleleke itshe kanye nesakhiwo sensimbi yensimbi. Isakhiwo sivulekile impela futhi siyaqiniseka ukuthi itshe liyinkanyezi yomklamo. Uhlobo olungahambi kahle lwe-druzy kanye namabhola wensimbi abamba isakhiwo ndawonye kuletha ukuthamba okuncane ekubumbeni. Kuyinto egqamile, edgy futhi egqokekayo.
Ukukhangisa Ucezu ngalunye lwalwenziwe ngesandla ukuze lwenze imifanekiso ebunjiwe yezinambuzane eziphefumulelwe yindawo yazo nokudla ezikudlayo. Umsebenzi wobuciko wasetshenziswa njengendlela yokwenza isenzo ngewebhusayithi yeDoom nayo ikhomba izinambuzane ezithile zasekhaya. Izinto ezisetshenziselwa lezi zibazi zazitholakala kumayadi angenamsoco, kulahlwa udoti, imibhede yomfula kanye nezimakethe ezinhle kakhulu. Lapho izinambuzane zonke sezihlangene, zazithathwa izithombe ziphinde zigcwaliswe ku-photoshop.
Ibhodlela Isisekelo somqondo wabo siyinto ethinta imizwelo. Umqondo owakhekile wokuqamba amagama uhloselwe imizwa nemizwa yekhasimende, zinikeza inhloso yokumisa umuntu eduze kwaseshalofini elidingekayo futhi kumenze akhethe ngobuningi bezinye izinhlobo. Iphakheji labo libonisa imiphumela yokukhishwa kohlelo, amaphethini anemibala aprintiwe ngokuqondile ebhodleleni elimhlophe elilingana nesimo sezimbali. Kugcizelela isithombe somkhiqizo wemvelo.
Iwayini Lingaba Umklamo wewayini, izwe lomsuka futhi idolobha selinake kakhulu. Sesha ngemidwebo emincane nemidwebo yendabuko. Izisusa ezibalulekile zathola ukuthi ukufeza inhloso, lokhu kusho ukuthi ngenkathi ukwakheka kwebhodlela letibhodlela lewayini elenziwa ngokwejwayelekile bekusebenza kahle kakhulu. I-Motif eyayisetshenziswe ekwakhiweni, ama-arabesques.Izi motifs ezithathwe kumdwebo we-Iranian Varnished. Idizayini izama ukwakha amacebo okuqala nawokudala futhi ilwela ukudala umklamo ngencazelo engaphakathi, futhi uphathe umyalezo obalulekile.
Isihloko Esivulayo Indandatho Yokwakheka Ukukhangisa U-Ayisikhilimu Ibhodlela Iwayini Lingaba